No. 2087, Sunday, March 17, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2087, Sunday, March 17, 2019
No. 2087, Sunday, March 17, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၉)
တနင်္သာရီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ပါတီတွင်း အရေးယူမည်ဟု ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပြော
အဂတိဖြင့် အရေးယူခံထားရသည့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ပါတီတွင်း အရေးယူမှုများပြုလုပ် မည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) ဒေါက် တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။
ရခိုင်တိုက်ပွဲများကို စိုးရိမ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
တိုက်ပွဲများဖြစ် ပွားနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်အ တွက် စိုးရိမ်ကြောင်းနှင့် တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး မေတ္တာတရားဖြင့်ဆက် ဆံရန် ဒီချုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတိုက် တွန်းပြောကြားသည်။
ရေမြောင်းအတွင်းထိုးကျသည့် ၀ိုင်ဘီအက်စ် ကားခေါင်းအတွင်း ညပ်နေသောယာဉ်မောင်းကို ဆွဲထုတ်ခဲ့ရ
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း တွင် YBS (၂၉) ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်တစ်စီး လမ်းဘေးရေမြောင်းအတွင်း ထိုးကျသဖြင့် ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားဒဏ်ရာရရှိမှု ယမန်နေ့ က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
AA ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိဟု သုတေသနအဖွဲ့ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေချရန် ကြိုးစားနေသည့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)ကို တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ရာတွင် အိန္ဒိယတပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရ ကြောင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အခြေအနေအားစောင့်ကြည့်လေ့ လာနေသည့် သုတေသနအဖွဲ့ လေ့လာစောင့်ကြည့်
ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲတွင် လီဗာပူး၌ ဟန်ဒါဆင်မပါဝင်
လီဗာပူး - လီဗာပူးအသင်းခေါင်း ဆောင် ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆင်သည် ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာ မသက်သာ သေးသဖြင့် ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲလွဲချော် မည်ဟု နည်းပြ ဂျာဂန်ကလော့ပ် က ပြောသည်။
ရော်နယ်ဒိုကို လက်ရွေးစင်အသင်းသို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူ၊ ဂျာမနီအသင်းတွင် ကစားသမားသစ်သုံးဦး ပါဝင်
လစ္စဘွန်း၊ ဖရန့်ဖတ် - ရုရှားကမ္ဘာ့ ဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်း ပထမ ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပေါ်တူဂီက ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကို လက် ရွေးစင်အသင်းသို့ ပြန်လည်ခေါ် ယူခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်း၌ မဟာဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ရေး မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူမည်
ဓာတ်အားခဈေးကြီးမြင့် နေသည့် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ပထမဆုံးမဟာဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စား သည့်ကုမ္ပဏီများကိုမတ်လ ၁၈ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်မည်ဟု လျှပ် စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက သ တင်းထုတ်ပြန်သည်။
နော်ဝေးအပါအ၀င် ကုမ္ပဏီလေးခုက ချင်းပြည်နယ်တွင် ဒေါ်လာ ၅၄ သန်းတန် စီမံကိန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်လက်မှတ်ရေးထိုး
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပ သည့် ချင်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြပွဲ၌ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီလေးခုကြား ကန်ဒေါ်လာ ၅၄ သန်းတန်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
နေပြည်တော် စက်မှုဇုန်တွင် မြေတစ်ဧက ကျပ် ၈၂၅ သိန်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချမည်
အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ တော် နေပြည်တော်ရှိ အသေးစား နှင့် အလတ်စားစက်မှုဇုန်တွင်ရင်း နှီးမြှုပ်နှံရန် အခြေခံအဆောက် အအုံကြေးအပါအဝင် မြေတစ်ဧ က ကျပ် ၈၂၅ သိန်းဖြင့်ရောင်း ချပေးမည်ဟု နေပြည်တော်စည် ပင်သာယာရေးကော်မတီက သ တင်းထုတ်ပြန်သည်။
GGS ကိစ္စဖြေရှင်းရန် စာချုပ်စာတမ်းများကို သေချာလေ့လာနေဟု တနင်္သာရီတိုင်း ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ပြော
နိုင်ငံတော်သို့ ကျပ်သန်း ကိုးထောင်ခန့် ပေးသွင်းရမည့် GGS (Global Green Services) ကုမ္ပဏီ၏ ဓာတ်ငွေ့ဖိုးကြွေးကျန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စာချုပ်စာ တမ်းများကို သေချာလေ့လာကာ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ယာယီဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်က 7D
နုတ်ထွက်ခဲ့သည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ညွှန်ကြား
နုတ်ထွက်စာတင် ထားသည့် မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လုပ် ငန်းတာဝန် ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ညွှန်ကြားထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လေးလအတွင်း တိုက်ပွဲများ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)အကြား ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများသည် လေးလအတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာသည်။
တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ကုလားတန်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများကို ပလက်ဝမြို့သို့ ခေတ္တခေါ်ယူထားဟု ချင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
AA အဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ တန်ကုလားတန် ဘက်စုံသုံး စီမံကိန်းသည် လက်ရှိတွင် နှောင့်နှေးနေသော်လည်းရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဆလိုင်းလျန်လွယ်က ပြောသည်။
မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း လက်နက်ကြီးကျည်နှစ်လုံး ကျရောက်
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရောက်ရန် ဆောင်ရွက် နေသည့် မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်းလက်နက်ကြီးကျည်နှစ်လုံး ပထမအကြိမ် ကျရောက်ခဲ့သည်ဟုရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန (မြောက်ဦး)ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ပြောသည်။
အပူဒဏ်ကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူရသည့် လူနာအချို့ရှိလာ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်လာသဖြင့် အပူ ဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿ နာများခံစားရပြီး ဆေးရုံ၊ ဆေး ခန်းသို့ လာရောက်ကုသမှုခံယူ သည့်လူနာများ ရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးခန်းအချို့မှ စုံ စမ်းသိရသည်။
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း စက်လှေတိမ်းမှောက်၍ သတ္တမတန်းကျောင်းသူတစ်ဦးအပါအ၀င် အမျိုးသမီး ခြောက်ဦးသေဆုံး
တိုက်ကြီးမြို့နယ် အ ဖျောက်မြို့ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ယမန်နေ့ နံနက်က လူ ၂၀ ကျော်လိုက်ပါလာသော စက်လှေတိမ်း မှောက်ရာ သတ္တမတန်းကျောင်း သူတစ်ဦးအပါအ၀င် အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီး ခြောက်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲအတွင်း ပျောက်ဆုံးနေသော နမ္မတူဒေသခံ ၁၂ ဦးအရေး ယနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ပွားနေ သော တိုက်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံး နေသော မန်လီရွာသား ၁၂ ဦး ပြန်လွှတ်ပေးရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သော်လည်း ၁၆ ရက် ကြာသည်အထိ လွတ်မြောက်လာ ခြင်းမရှိသေး၍ ဒေသခံများက ယနေ့(မတ်လ ၁၇ ရက်)တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုမည်ဖြစ် သည်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများ၏ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် နဝမတန်း ပြင်ပဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ တွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန် နဝမတန်းပြင်ပဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပ မည်ဟု ကရင်ပြည်နယ်ပညာရေး မှူးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြောင်းမြအကျဉ်းထောင် တွင် တစ်ခန်းတည်းအတူနေ အကျဉ်းသားအချင်းချင်း လူသတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းရွှေက အတည်ပြု သည်။
ရန်ကုန်တွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်
အဂတိလိုက်စားမှု တား ဆီးကာကွယ်ခြင်းသည် အဖွဲ့အ စည်းတစ်ခုတည်းက တစ်ဖက် သတ်လုပ်နေ၍မရဘဲ အပြန်အ လှန်ကတိကဝတ်ဖြင့် ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်စွာ လိုက်နာအကောင် အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည် ကပြောသည်။
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားသည့် လူငယ်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ဟုဆို
တွံတေးတွင် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားသည့် လူငယ်အဖွဲ့ကို ရဲ တပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှု မတ်လ ၁၅ ရက်ညက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တွံတေးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး က ပြောသည်။
ဘဝသက်တမ်းအပေါ် မျိုးရိုးဗီဇက လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း ရိုးရှင်းသောအရာများက ရောဂါကြီးကြီးမားမားရရှိနိုင်ခြေကို ချေဖျက်နိုင်သည်။ အောက်ပါရိုးရှင်းသောစည်းကမ်းများ လိုက်နာပါ က အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်သည်။
အိုလံပစ်စကိတ်စီးမယ်နဲ့တွဲနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ အဆိုတော် ကန်နမ်
ကေပေါ့ပ်အဆိုတော် ကန်နမ်သည် အိုလံပစ်အမြန်စ ကိတ်စီးရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် လီ ဆောင်ဟွာနှင့် တွဲနေကြောင်း မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် မီဒီယာများ က ဖော်ပြသည်။
သင်္ကြန်အပြီးမှာ တစ်ကိုယ်တော်အခွေသစ်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
တစ်ကိုယ်တော်အခွေ သစ်ကို သင်္ကြန်အပြီးတွင်ထွက်ရှိ နိုင်ရန် ကြိုးစားနေပြီး ကိုယ်တိုင် ရေးထားသည့်သီချင်းများလည်း ပါဝင်မည်ဟု ပန်းရောင်ခြယ်က ပြောသည်။
အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပေမယ့် အကယ်ဒမီမမှန်းရဲတဲ့ အလင်းရောင်
၂၀၁၈ အကယ်ဒမီဆန် ခါတင်စာရင်းတွင် ဇာတ်ကားငါး ကားပါဝင်သော်လည်း မမျှော်မှန်း ရဲကြောင်း သရုပ်ဆောင်အလင်း ရောင်က ပြောသည်။
တစ်သက်တာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဖြစ်နိုင်ခြေများဟုဆို
၂၀၁၈ အကယ်ဒမီပေးပွဲ တွင် ပေးအပ်မည့် တစ်သက်တာ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုကို စည်သူဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်က ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်လောကသားများက ခန့်မှန်းထားကြ သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စရေး လေသံပစ်နေသည့် အတိုင်ပင်ခံ၊ အသံတိတ်ကော်မရှင်နှင့် စိုးရိမ်ကြသူများ
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံ ကိန်းကို ပြန်လည်စတင်မည်ဆို ပါက လက်ရှိတွင် လူထုထောက်ခံ မှု အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ် သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် NLD နှင့် ၎င်း၏ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူလူထုအကြားတွင် စိတ် ဝမ်းကွဲလွဲမှုများ ရှိလာနိုင်သည်ဟု ဝေဖန်သူတချို့က သုံး
ဟောင်းနွမ်းပြီး အန္တရာယ်ရှိသောရုံးများ ပြုပြင်၊ အသစ် ဆောက်လို၍ ဘတ်ဂျက်မဖြတ်ရန် လွှတ်တော်ထံတောင်းဆို
ဟောင်းနွမ်းပြီး ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေဆိုးရွားနေ သော ရုံးများနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ များဆောက်လုပ်လို၍ ဘတ်ဂျက် ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုရန် အလုပ် သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ က မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ပြည် သူ့လွှတ်တေ